စမတ်ဖုန်းအတွက် Smart Android Wifi Mini Portable Beamer ကိုဝယ်ယူပါ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်လုံးဝမပေးဆောင်ပါနှင့် WoopShop®
စမတ်ဖုန်းအတွက် Smart Android Wifi Mini Portable Beamer
မှစ. သင်္ဘောများ ၾသစေတးလ် တရုတ်နိုင်ငံ ဂျာမနီ အင်ဒိုနီးရှား ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပြင်သစ် အီတလီ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ဘရာဇီး ပိုလန် ဘယ်လ်ဂျီယမ်
အရောင် Update ကိုဗားရှင်း အခြေခံဗားရှင်း
သြစတြေးလျ / Update ကိုဗားရှင်း တရုတ် / Update ကိုဗားရှင်း ဂျာမန် / Update ကိုဗားရှင်း အင်ဒိုနီးရှား / Update ကိုဗားရှင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Update ဗားရှင်း စပိန် / Update ကိုဗားရှင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / Update ကိုဗားရှင်း ပြင်သစ် / Update ကိုဗားရှင်း အီတလီ / Update ကိုဗားရှင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း / နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ / Update ကိုဗားရှင်း ဂျာမန် / အခြေခံဗားရှင်း စပိန် / အခြေခံဗားရှင်း ယူနိုက်တက်စတိတ် / အခြေခံဗားရှင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း / အခြေခံဗားရှင်း တရုတ် / အခြေခံဗားရှင်း အီတလီ / အခြေခံဗားရှင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ / အခြေခံဗားရှင်း အင်ဒိုနီးရှား / အခြေခံဗားရှင်း ပြင်သစ် / အခြေခံဗားရှင်း သြစတြေးလျ / အခြေခံဗားရှင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အခြေခံဗားရှင်း ဘရာဇီး / အခြေခံဗားရှင်း ပိုလန် / အခြေခံဗားရှင်း ဘရာဇီး / Update ကိုဗားရှင်း ပိုလန် / Update ကိုဗားရှင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ / Update ကိုဗားရှင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ / အခြေခံဗားရှင်း
စမတ်ဖုန်းအတွက် Smart Android Wifi Mini Portable Beamer - Australia / Update Version backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Keystone Correction: အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊
မျက်နှာပြင်စကေး: 4: 3/16: 9
အိတ်ဆောင် - ဟုတ်တယ်
ချုံ့ချဲ့မှု - မရှိ
စနစ် - Android
တောက်ပ: 250ANSI Lumens
စီမံကိန်းအရွယ်အစား: 30-150 လက်မ
အလင်းရင်းမြစ် - အလင်းရောင်
Contrast အချိုး: 1000: 1-2000: 1
အသုံးပြုခြင်း - အိမ်
Projective Mode: Mirror Image, Back Projection, Throwing, Ceiling
စီမံကိန်းအကွာအဝေး: 1 မီတာ -4 မီတာ
အမျိုးအစား: Smart Pocket Projector
ပါဝင်သည့် Bluetooth - Bluetooth Speaker နှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု
မျက်နှာပြင်စုံအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု - iPhone Smart Android Tablet မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်
ပစ်လွှတ်: 30-150 လက်မ
Support Max max: 4K
LED ကြာရှည်ခံနိုင်သောအသက် ၂၀၀၀၀ နာရီ - တစ်နေ့လျှင် ၄ နာရီအသုံးပြုပါက ၁၀ နှစ် - အနာဂတ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသောလုပ်ဆောင်ချက် - စမတ်ဖုန်းကို Wifi နဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ
ဥရောပ CE RoHs စံ: ဟုတ်ကဲ့
ယူအက်စ် FCC စံ: ဟုတ်ကဲ့
7.1.2 က Android OS ကို
Bluetooth: Bluetooth 4.0 (HD interface မှလွဲ၍)
CPU: RK3128၊ Quad-Core
မှတ်ဉာဏ်: RAM 2G DDR3, ROM 32GB eMMC
Screen Wireless Push: Airplay / Wifi-display (Via happy cast APP မှတစ်ဆင့်)
စမတ်ဖုန်းဖြင့်ဝိုင်ယာလက် display: ပို၍ တည်ငြိမ်သည်
စမတ်ဖုန်းဖြင့်ကြိုးမဲ့ display: Multi-screen အတွက်စမတ်ဖုန်းနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ပံ့ပိုးမှုစင်တာ Multi-screen, Mirroring Screen, Miracast (android OS device အတွက်), Airplay (iOS device အတွက်)
Android mode တွင်အော်တိုဒေါင်လိုက်သော့ခလောက် - သင်၏လက်များကိုအခမဲ့ (ဒေါင်လိုက်သော့ချက် - အော်တိုလက်စွဲ၊ ၄၅ ဒီဂရီ၊ ထောင့်အဓိက - လက်စွဲ - ၄၅ °)
Electronic zoom: အန်းဒရွိုက်စနစ်ဖြင့်သာအဝေးထိန်းညှိခြင်းညှိနှိုင်းမှု
UFO P10 တွင် ၀ င်ရိုးတန်း ၁၀၀% ရှိသည်။ အခြား Projector တွင်မရှိ။ စားပွဲ၌ရုပ်ပုံတစ်ပုံဖြတ်သည်
အလင်းအင်ဂျင်: DLP 0.3 "DMD
အလင်းရင်းမြစ် - RGB 3LED၊ အသက်ရှည်ရှည်
အလင်းသက်တမ်း - ၃၀၀၀၀ နာရီ
တောက်ပ: 250 ANSI lumens
contrast အချိုး: 2,000: 1
ဓာတ်ပုံအရည်အသွေး (resolution) 854 * 480 (WVGA)၊ မက်ဆေ့ခ်ျကို HD interface မှတဆင့် 4K ထောက်ပံ့သည်
အချိုးပစ်: 1.21: 1
စီမံကိန်းအရွယ်အစား: ၃၀-၁၅၀ ''
စီမံကိန်းအကွာအဝေး - ၁-၄ မီတာ
P10 Update ဗားရှင်း - Built-in 4200mAh Li-ion ဘက်ထရီ
Interface ကို HD 2.0 x1; USB (USB SSD Hard Drive၊ Support Mouse နှင့် Keyboard Control မှအချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ) x1;
TF ကဒ် (အများဆုံးပံ့ပိုးမှု 32G) x1;
၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက် (အသံထွက်) x3.5
Projection Mode: ရှေ့၊ နောက်၊ မျက်နှာကျက်ရှေ့၊ မျက်နှာကျက်
Keystone Correction: အလိုအလျောက် / လက်စွဲဒေါင်လိုက်သော့အုတ်ကျိုး၊ ၄ ထောင့်သောသော့ချက်ကျသော (အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်)၊ HD မျက်နှာပြင်တွင်သော့ချက်ကျသောအရာမရှိပါ
ကိရိယာ - ၁၅၈ မီလီမီတာ * ၈၀ မီလီမီတာ * ၁၈ မီလီမီတာ (၆.၂ လက်မ၊ ၃.၁ လက်မ * ၀.၇ လက်မ)
အလေးချိန်: 255g / 0.562LBS
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ချက်ချင်းပေးပို့ (ဝယ်ယူမှုထိုနေ့၌မှာယူခဲ့သည်အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံးလာ၏) ။ ကောင်းပါတယ်ထုပ်ပိုး ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်စွာ - တိုင်ကြားချက်မပါဘဲလွန်။
သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား (လက်ကိုင်ဖုန်းထက်အနည်းငယ်ထူသော) မှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပရောဂျက်သည်ဒီအရည်အသွေးကိုလုံးဝမျှော်လင့်မထားပါဘူး။ ကျိန်းသေသင်ဝယ်နိုင်, ထိုကိရိယာအစုံအတွက်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနှင့်သေးငယ်တဲ့ tripod လည်းမရှိ။
ပထမ ဦး ဆုံး projector, အရာအားလုံးစူပါဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းပေမယ့်အရည်အသွေးအချိုးအစားသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ကျနော်တို့ညနေ4မီတာကနေကြည့်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံကအိမ်မှာ။